व्यवस्थापन र खेलाडीको कमजोरीले निम्त्याएको लज्जास्पद नतिजा
आइसिसी विश्वकप लिग–२
विराटनगर । अमेरिकाले आइसिसी विश्वकप लिग–२ त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजमा पहिलो पटक नेपाललाई ६ विकेटले पराजित गरेको छ । शुक्रबार राती नेपालले ओडिआईमा अमेरिकासँग पहिलो पटक हारेको हो । जितको लागि १ सय ७५ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको अमेरिकाले २९.३ ओभरमा ४ विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो ।
अमेरिका जितमा स्टिभ टेलरले ६३ बलमा १२ चौका र ३ छक्का सहित सर्वाधिक ९२ रनको योगदान दिए । जसकरण मल्होत्रा ३२ बलमा २ चौका र ३ छक्का सहित ३६ रनमा अविजित रहे । त्यस्तै मोनांक पटेल ७० बलमा १ चौका सहित ३८ रनमा अविजित रहे । नेपालका सन्दीप लामिछाने र करण केसीले दुई दुई विकेट लिए ।
त्यसअघि अल अमरेत क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपाल ४८ ओभरमा १ सय ७४ रनमा अल आउट भएको थियो । नेपालका लागि ज्ञानेन्द्र मल्लले १ सय ५ बलमा ३ चौका सहित सर्वाधिक ५५ रनको योगदान दिए । ज्ञानेन्द्र बाहेक अन्य नेपाली ब्याट्सम्यानको प्रदर्शन सम्झन लायक रहेन । नेपालले खराब ब्याटिङ गर्दै अन्तिम ३४ रन जोड्दा ६ विकेट गुमाएको थियो ।
डेब्यू खेल खेलेका तीव्र गतिका बलर काइल फिलिपको बलमा आसिफ ठूलो सट खेल्ने धुनमा टप एज लागेर करिमा गोरबाट तीन रनमा क्याच आउट हुन पुगेका थिए । दोस्रो विकेटका लागि कुशल र ज्ञानेन्द्रले ५१ रनको साझेदारी गर्दै नेपाललाई खेलमा फर्किने आशा देखाएका थिए । स्पिनर करिमाले १२ औं ओभरको तेस्रो बलमा कुशललाई ३६ रनमा बोल्ड आउट गरेका थिए ।
त्यसपछि नेपालले लगातार विकेट गुमाउन पुग्यो । कुशल भुर्तेल ४३ बलमा ५ चौका र १ छक्का सहित ३६, गुलशन झा २८, करण केसी १२ र सन्दीप लामिछाने ११ रनमा आउट भए ।अमेरिका कप्तान सौरभ नेत्रवालकरले ९ ओभरमा २९ रन खर्चेर ४ विकेट लिए । काइल फिलिपले ९ ओभरमा १ मेडन सहित ४३ रन खर्चेर ३ विकेट लिए ।
ओमान भ्रमणमा नेपालको यो लगातार दोस्रो हार हो । यसअघि ओमानसँग ५ विकेटले पराजित भएको थियो । अमेरिकासँग खेलमा नेपालले ब्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङ तीनै क्षेत्रमा कमजोर प्रदर्शन गर्यो । नेपालको हार्नुमा मैदान भित्र मात्र नभएर बाहिर लिएको निर्णय पनि रहेको छ । नेपालले आफ्नो क्षमता अनुसारको प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । नेपालले पहिलो पटक अमेरिकासँग ओडिआई खेलमा हार्नुमा सबैको गल्ती रहेको छ । पुरानै समस्याहरु पुन चिन्ता थप्न थालेका छन् । समग्रमा नेपालले अमेरिकासँग हार्नुका पाँच मुख्य कारण यस प्रकार छन् ।
नेपालको कमजोर बलिङ अमेरिकाविरुद्ध पनि सुधार हुन सकेन । नेपालले उत्कृष्ट बलिङ मार्फत खेलमा जित निकाल्न सक्थ्यो । बलिङ नै नेपालको प्रमुख हतियार हो । तर नेपालको बलिङनै चल्न सकेन । प्रमुख बलर सोमपाल कामी लगातार दोस्रो खेलमा विकेटबिहिन बने । गुलशन झा र सुशान भारीले पनि विकेट लिन सकेनन् । करणले दुई विकेट एक ओभरमा लिँदा खेल नेपालको हारबाट निस्किसकेको थियो ।
सन्दीपले नेपाललाई पाँचौं ओभरमा दुई सफलता दिलाएका थिए । तेस्रो सफलताको लागि नेपालले २० ओभर सम्म पुग्नु परेको थियो । तेस्रो विकेटका लागि मनांक र स्टिभ टेलरले ९७ रनको विजयी साझेदारी गरेका थिए । योगफल सानो थियो । यो अवस्थामा नेपाललाई जित लगातार विकेटले मात्र दिलाउन सक्थ्यो ।
टेलरको उत्कृष्ट ब्याटिङ
अमेरिका जितमा ओपनर स्टिभ टेलर नायक बने । टेलरले कुनैपनि समय नेपाली बलरलाई अमेरिकाविरुद्ध हाबी हुने मौका दिएनन् । आक्रामक ब्याटिङका गर्दै नेपाली बलिङ कमजोर सावित गर्दै टेलरले सहज जित दिलाए । उनले ६३ बलमा १२ चौका र ३ छक्का सहित ९२ रनको इनिङ खेल्दै प्लेयर अफ द म्याच चुनिए । पाँचौं ओभरमा सन्दीपले दुई विकेट लिएपछि नेपाललाई खेलमा फर्किने अवसर थियो । तर छैटौं ओभरमा टेलरले गुलशनलाई तीन चौका र १ छक्का सहित २१ रन प्रहार गर्दै मोमेन्ट अमेरिका पक्षमा फर्काएका थिए ।
उनको आक्रामक ब्याटिङले गदै अन्य खेलाडीलाई दबाब बढ्न दिएनन् । टेलरलाई सस्तैमा आउट गर्न सकेको भए नतिजा नेपालको पक्षमा आउन सक्थ्यो । उनी आउट हुँदा अन्य खेलाडीमा दबाब बढ्थ्यो । नेपाली बलरको मनोबल उच्च हुन्थ्यो । दबाबमा विकेट गुम्ने सम्भावना बढी हुन्छ । उच्च मनोबल हुँदा बलरले थप उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नसक्छ । टेलरले बाउन्ड्री वा रन जोडि रहेको बलमा अर्को खेलाडी आउट पनि हुन सक्थ्यो ।
दुई महत्त्वपूर्ण क्याच ड्रप
नेपालले महत्वपूर्ण समयमा दुई क्याच ड्रप गरेको थियो । ओमान भ्रमणमा तुलनात्मक रुपमा फिल्डिङ केहि कमजोर देखिएको छ । स्पिनर सुशान भारीको आठौं ओभरको तेस्रो बलमा टेलरले ठूलो सट खेल्नेक्रममा लङअङमा कुशल भुर्तेलले क्याच ड्रप गरेका थिए । उक्त समय टेलर ४२ रनमा क्रिजमा थिए । सोमपाल कामीको बलमा गुलशन झाले जसकरण मल्होत्रा क्याच शून्यमा ड्रप गरे । टेलरले उक्त क्याच ड्रपपछि थप ५० रन जोडे । मल्होत्राले ३६ रनमा नटआउट रहँदै जित पक्का गराए ।
नेपाललाई विकेट चाहिएको समयमा क्याच ड्रप गर्नु ठूलो घातक बन्यो । उक्त क्याच ड्रपले बलरको मनोबल कमजोर र निराश मैदानमा देख्न सकिन्थ्यो । टेलर र मल्होत्रा प्रमुख ब्याट्सम्यानकै क्याच ड्रप भएपछि नेपालको जितको सम्भावना सकिएको थियो । खेलमा यस्ता अवसर निकै कम आउछन् । त्यो अवसर सदुपयोग गर्न सके खेलको टर्निङ प्वाइन्ट बन्ने गर्दछ । नेपालले अवसर सदुपयोग गर्न सकेन । दुई क्याच ड्रप नेपालको हारको एक कारण बन्न पुग्यो ।
मध्यक्रममा अनुभवी शरदको अभाव
नेपालको हारको कारण कप्तान, टिम म्यानेजमेन्ट र प्रशिक्षकले बढी लिनुपर्छ । ब्याटिङ नेपालको सधैं प्रमुख कमजोरी हो । ओमान भ्रमणमा मध्यक्रम र तल्लोक्रम अझ कमजोर देखिएको छ । तर अनुभवी ब्याट्सम्यान शरद भेषावकरलाई नेपालले प्लेइङ ११ मा पुन राखेन । मध्यक्रममा उनको आवश्यकता धेरै देखिन्छ । तर नेपालले अमेरिकाविरुद्ध पनि शरदलाईनै प्लेइङ ११ मै राखेको थिएन । पिएनजीसँगको पहिलो खेल खेलेपछि शरद लगातार चार खेलमा बेन्चमा रहे ।
शरदलाई बेन्चमा राख्नुको कुनै सहि कारण देखिदैन । मध्यक्रम कमजोर छ । खेलाडी फ्लप छन् । तर पनि शरदले मौका पाएका छैनन् । लगातार फ्लप कुशल मल्ललाई नेपालले थप विश्वास गर्दै टोलीमा खेलाएको थियो । तर उनी शून्यमा आउट भए । कुशलले ५ खेलमा ७ रन मात्र बनाएका छन् । सुरुवाती तीन खेलमा एक एक, ओमानसँग चार र अमेरिकासँग शून्यमा आउट भए ।
शरद मध्यक्रममा हुने हो भने नेपालको प्रदर्शन फेरिन सक्छ । युवा खेलाडी दबाबमा खराब सटका साथ आउट भइरहेका छन् । शरद दबाबमा आफ्नो अनुभवको भरपूर्ण फाइदाका साथ राम्रो योगफल बनाउन सक्छन् । आवश्यक खेलाडीनै बाहिर राखेपछि ब्याटिङ झनै कमजोर बनेको छ ।
गैर जिम्मेवारी ब्याटिङ
नेपालको हारको मुख्य कारण ब्याट्सम्यानहरुको गैरजिम्मेवार ब्याटिङ हो । कुनैपनि ब्याट्सम्यानले जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्न सकेनन् । सबै गैर जिम्मेवार ब्याटिङ र खराब सटलेनै नेपालको रन बन्न सकेको छैन । युवा ब्याट्सम्यान रोहित कुमार पौडेल कोरिमा गोरले कभरमा एक हातले उत्कृष्ट क्याच लिएपछि आउट भएका थिए । अन्य सबै ब्याट्सम्यान गलत सट छनोटका कारण आउट भएका थिए । क्रिजमा जिम्मेवारीका साथ खेल्न सकेका छैनन् ।
निरन्तर विकेट पतन भइरहेको छ । त्यो अवस्थामा खेलाडी ठूला सटको चक्करमा विकेट गुमाइरहेका छन् । अमेरिका खेलाडीले उत्कृष्ट बलिङ गरेर भन्दा पनि ब्याट्सम्यानले आफ्नै कारण विकेट दिइरहेका थिए । सट छनोट निकै खराब थियो । जिम्मेवारी बिना राम्रो योगफल बन्न सक्दैन । स्कोरबोर्डमा राम्रो योगफल बिना जित निकै कठिन पर्छ । आगमी दिनमा पनि जिम्मेवारी प्रदर्शन बिना नेपाललाई जित कठिन पर्न सक्छ । गैरजिम्मेवार पन पछिल्लो समय नेपाललाई सबैभन्दा ठूलो चिन्ता र हारको कारण बन्दै आएको छ ।
शनिबार, ०२ असोज, २०७८, बिहानको १०:५७ बजे
जागिरे नेताको विश्वास कहिलेसम्म ?
राजनीति पेशा हुन थाल्यो । कसरी ? राजनीति गर्ने व्यक्तिले पेशामा ‘राजनीति’ लेखेको धेरैठाउँ देखेको छु । ‘के गर्नुहुन्छ ?’ जवाफ आउँछ, ‘राजनीति गर्छु ।’ कसका लागि ?’ जवाफ आउँछ, ‘जनताका लागि ।’ कसको पक्षमा ? जवाफ आउँछ, ‘जनताको पक्षमा
कोशी अस्पताल पाँच सय शैय्याको स्वीकृत हुन्छ : मन्त्री खतिवडा
विराटनगर । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले बुधबार विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालको निरीक्षण गरेका छन् । उनले कोशी अस्पतालको निरीक्षण गरेपछि काठमाण्डौं मन्त्रालय पुगेपछि तत्काल कोशी अस्पतालको पाँच शैय्या अस्पतालको स्वीकृत गरिदिने बताए । ‘कोशी अस्पताल यसअघि पनि आएको थिए
तस्करको समूहबाट दर्ता नभएका औषधि नेपाल भित्र्याइँदै, कान्तिपुर सर्जिकल शिल
विराटनगर । कमाउ धन्दालमा लागेका गिरोहले अनेक जुक्ति लगाएर औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका औषधी भारतदेखि नेपालमा भित्र्याउने गरेको पाइएको छ । भारतदेखि सर्जिकल सामान भन्दै दर्ता नभएका औषधीहरू नेपाल भित्र्याउने गिरोह सक्रिय भएको पाइएको हो । विराटनगर–१३ मा सत्यन्त्रकुमार
पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न ५९ सांसदको समर्थन
विराटनगर । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट अष्टलक्ष्मी शाक्यले राजीनामा दिएपछि पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेलाई अघि सारिएको छ । गठबन्धन दलमा आवद्ध ५९ सांसदको हस्ताक्षर सहित पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश